Receive calls on your Skype from the phone network with Ring2Skype
Ring2Skype isanew free service that allows you to receive phone calls on your Skype from the phone network! Once you sign up, you will getaphone number andaprivate extension. All calls to your extension ring at your Skype.
လေးစားရပါသော ကိုနေဘုန်းလတ် ...
မွေးနေ့မှသည် အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ၊ ချုပ်နှောင်မှုမှ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ
သူငယ်ချင်းမျိုးဝင်းအောင်၏ အစ်မသည် ယနေ့မနက် မြန်မာစံတော်ချိန် မနက် ၉ နာရီ ၅၀ တွင် ကွယ်လွန်သွားကြောင်း သိရပါသဖြင့် မိသားစုနှင့် ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းနည်းကြေကွဲရပါသည်။ ကင်ဆာဆိုတဲ့ ရောဂါဆိုးကြောင့် လူတစ်ဦးအသက်ဆုံးရှုံးသွားရပြန်ပြီပေါ့ :(
ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။မန္တလေးမြို့၌ ဇွန် (၂၁) ရက် နောက်ပိုင်းတွင် ပလတ်စတစ်အသုံးမပြုရဟု စီမံချက်ချထားသောကြောင့် ပလတ်စတစ်စက်ရုံများ ပိတ်လိုက်ရကြောင်း မန္တလေးမြို့ခံ ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်ငန်းရှင်များက ပြောသည်။
“ပလတ်စတစ်ကို အသုံးမပြုရဘူးလို့တော့ မြို့တော်ဝန်က အမိန့်ထုတ်ပါတယ်။ ဇွန် (၃) ရက်က ထုတ်တဲ့ အမိန့်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာကို အစားထိုးရမယ်ဆိုတာတော့ မညွှန်ကြားသေးပါဘူး။ ကျနော်တို့အနေနဲ့လည်း ဘာမှအစားထိုးဖို့ ကိစ္စကို လုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး” ဟု မန္တလေးစည်ပင် အရာထမ်းတဦးက ပြောသည်။
ပြည်သူချစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ခ) အမေစု
၆၄ နှစ်မြောက် မွေးနေ့မှသည်
ချုပ်နှောင်မှုမှ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေ
ယနေ့ မနက်ပိုင်းမှာတော့ သာသနရံသီဝိဟာရ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ အမေစု မွေးနေ့အတွက် သံဃာတော်များကို ဆွမ်းဆပ်ကပ်ပြီး ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါမယ်။
နေ့လည်ပိုင်းမှာတော့ မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ အမေစု လွတ်မြောက်ရေး Demonstration ပြုလုပ်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ညနေပိုင်းမှာတော့ သီးလေးသီးအဖွဲ့ မလာဖြစ်ပေမဲ့ Greenford Town Hall မှာ ဆုတောင်းပွဲအစီအစဉ်များနှင့် ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်များကို ဆက်လက်ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှာ ကျင်းပမည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၄ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲတွင် ပါဝင်ဖျော်ဖြေရန် စီစဉ်ထားသော သီးလေးသီးအဖွဲ့သည် Visa အခက်အခဲကြောင့် ကပြဖျော်ဖြေနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။
Lunch offering to Monks and Saying Prayers for Daw Aung San Suu Kyi
Venue: Sasana Ramsi Vihara (Colindale Monastery)
83 Booth Road, Colindale, London NW9 5JU
Demonstration at Military Regime Embassy
Birthday Celebration - Burmese cultural event
Greenford Assembly Hall, Ruislip Road, Greenford, Middlesex UB6 9QN
Tube: Greenford (Central Line) then take bus 105 or E6
Traditional Songs, Dances and Comedy Play
Thee Lay Thee Performance
(A Burmese Comedy Group touring democratic countries - this is Zarganar's comedy troupe - he isafamous Burmese comedian. Arrested in 2008 he is currently servinga35 year prison sentence - he annoyed the junta by leading entertainers in giving out Cyclone Nargis aid, which helped 42 villages. BBC News: http://news…
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရုံးတင်တရားစွဲဆိုတာဟာ ပြည်တွင်းဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုတာဖြစ်ပြီး ပြည်ပဖိအားတွေကို လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ မြန်မာအစိုးရက အခိုင်အမာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့၊ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မြန်မာဆိုပြီး ၀င့်ကြွားထည့်ဝါနိုင်ဖို့သာ မလုပ်တတ်တာ ကလိမ်ကကျစ်ဥာဏ်၊ ယုတ်မာတဲ့အတွေးအခေါ်၊ ယုတ္တိမရှိတဲ့ ပုဒ်မတွေကျတော့ တော်တော့်ကိုထွက်တယ်နော်။ ခင်ဗျားတို့ ဦးနှောက်တွေထဲမှာ ချီးတွေပဲ ရှိတာသေချာတယ်။